Tacadiyada haweenka loo geysto oo looga hadlay kulan lagu qabtay Caabudwaaq – Radio Muqdisho
Kulan looga hadlayay tacadiyada iyo dhibaaatada lagu hayo dumarka ee xaqooda lagu duudsiyo ayaa lagu qabtay degmada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud.
Ururka Difaacayaasha Xaquuqda Dumarka oo soo qaban qaabiyay kulanka ayaa soo bandhigay tacadiyo kala duwan oo ay sheegeen in lagula kacay dumarka oo ay diiwaangeliyeen, waxaana kala qayb galay kulankaasi xubno ka socday maamulka degmada Caabudwaaq iyo wakiilo ka kala socday hay’adaha kala duwan ee ka howlgala degmada iyo qaybaha bulshada Caabudwaaq ku nool.
Ka qeyb galayaasha kulanka ayaa ka dooday sida looga hortagi karo tacadiyada ka dhanka ah dumarka, isla markaana loo soo saari lahaa sharciyo lagu xakumayo dadka dhibaatooyinka u geysta dumarka, waxaana ugu dambeyn la isku afgartay in si wada jir ah wax looga qabto arrimaha ka dhanka ah haweenka.
Ugu dambeyntii ayaa shirka waxaa kaloo la isku raacay in dumarka laga qeyb geliyo hanaanka siyaasadeed ee gobolka, gaar ahaan tan Maamulka iyo horumarka degmada Caabudwaaq ka socda.
Waa markii ugu horaysay oo la qabto kulan looga hadlayo xuquuqda dumarka iyo tacadiga ay la kulmaan, laguna qabto degmada Caabudwaaq.